Ahoana ny fomba hampianarana ny alika handeha amin'ny tranokalanao | Tontolo alika
Ny fiainana miaraka amin'ny alika dia midika fizarana fotoana tsara maro ary ny sasany tsy dia tsara loatra amin'ny biby izay te hiaraka amintsika fotsiny. Ity dia zavatra mety hiteraka olana, indrindra amin'ny fotoam-pisakafoanana satria tsy mahafinaritra ny olona sasany ny manana olona mangataka sakafo na fiheverana hatrany.
Noho io antony io dia mendrika ho fantatra izany ny fomba hampianarana ny alika handeha amin'ny tranokalanao. Ka aleo tonga any 🙂.
1 Rahoviana no hampiasa ilay baiko "mankany amin'ny tranonkalanao"?
2 Ahoana no hampianarana azy amin'ny alika?
Rahoviana no hampiasa ilay baiko "mankany amin'ny tranonkalanao"?
Ny baiko »amin'ny tranokalanao» tsy azo atao fialan-tsiny tsy miaraka amin'ny alika. Ity biby ity dia biby volom-borona izay mipetraka amin'ny vondrona sosialy, ao amin'ny fianakaviana, ary tsy mahay irery. Raha handany fotoana be lavitra any an-trano ianao, rehefa miverina dia mila mandray andraikitra amin'ny biby; Izany hoe mila entinao mitsangatsangana izy, milalao be miaraka aminy ary omena azy ny fikarakarana tsara indrindra mba hahasambatra azy isan'andro.
Ity dia baiko izay tsy tokony hampiasaina amin'ny tranga toa ilay nolazaiko teo am-piandohana: rehefa misakafo isika, na alohan'ny handehananay, na amin'ny toe-javatra toy izany.
Ahoana no hampianarana azy amin'ny alika?
Ny dingana, araka ny ho hitanao, dia tena tsotra. Na izany aza, tsy maintsy tadidinao foana fa ny volom-borona dia mila famerimberenana maro mandra-pahafantarany azy amin'ny farany:
Ampianaro fitsaboana doggie izy tianao be izany (ireo beicón dia tena atolotra anao, satria manitra fatratra izy ireo), ary ampiasao hitondrana azy io »amin'ny» toerana misy azy.
Avy eo, mangataha azy hipetraka »sit» na »hipetraka» ary, raha vao hitanao fa manomboka manao azy io dia lazao hoe "amin'ny tranokalanao". Raha tsy hainao ny mampianatra azy hahatsapa, click here.
Luego, omeo sakafo izy ho valisoa.
Ary izao, aza manalavitra 30-50cm eo ho eo. Tena azo atao ny mitsangana avy hatrany ilay volo ary manatona anao, fa avy eo tsy maintsy averinao ireo dingana.
Avereno imbetsaka, mifindra lavitra foana hatrany. Ka ho avy ny andro ahafahanao manome ny baiko na dia misakafo aza ianao 😉.
Fampaherezana sy faharetana be! Azo antoka fa hanao izany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampianarana ny alika handeha amin'ny tranokalanao
Fiandohana sy tantaran'ny Pekingese
Ny fahasamihafana sy ny toetran'ny Rottweilers amerikana sy alemanina